येशू प्रेषितहरू चेलाहरू निडर भई प्रचार गर्छन्‌ | बाइबल सन्देश
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइरिस आइसल्याण्डिक आम्हारिक आसामी इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इन्डोनिसियन साङ्केतिक भाषा इलोको उङ्गाबेरे उज्बेक उज्बेक (रोमन) उड्मुर्त उर्दू उर्होबो एस्टोनियन एस्टोनियन साङ्केतिक भाषा ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओसेसियन कम्बोडियन करेन (गः) काजाक काबाइली किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस सोरानी केक्ची कोंकनी (देवनागिरी) कोंकनी (रोमन) कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गाउरानी गुजराती ग्रीक ग्रीक साङ्केतिक भाषा ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिनियाँ साङ्केतिक भाषा चियाओ चेक चेक साङ्केतिक भाषा चोल जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जिम्बावे साङ्केतिक भाषा जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार डच डच साङ्केतिक भाषा डिगोर डुआला डेनिश तरहुमरा (मध्य) ताजिकी तामिल तारास्कान तेलगु तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्सोंगा थाई नर्वेली नाभाहो नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस निकारागुआन साङ्केतिक भाषा नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पारसी पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज पोर्चुगिज साङ्केतिक भाषा पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फुलफुल्डे (क्यामरून) फेरोई फ्रान्सेली बंगाली बाटाक (टोबा) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बिकोल बुल्गेरियन बोउलो ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मझाहुआ मडागास्कर साङ्केतिक भाषा मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माया मालागासी माल्टिज मिक्सटेक (ह्वाजुआपान) मिस्किटो मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन रोमानी (दक्षिणी ग्रिस) लाओशियन लाट्भियन लो जर्मन वारे-वारे शोना सिंहला सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल सोमाली स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
प्रेषितहरू निडर भई प्रचार गर्छन्‌
सतावटको बाबजुद ख्रीष्टका अनुयायीहरूको संख्या तीव्र गतिमा वृद्धि हुन्छ
येशूको स्वर्गारोहण भएको १० दिनपछि करिब १२० जना चेला इ.सं ३३ मा यहूदी चाड पेन्तिकोस मनाउन यरूशलेमको एउटा घरमा भेला भए। तिनीहरू बसेको घरमा अचानक ठूलो बतास बहेको जस्तो हुरूरूरू आवाज आयो। चेलाहरू चमत्कारपूर्ण तरिकामा तिनीहरूलाई थाह नभएको भाषाहरूमा बोल्न लागे। यो अनौठो घटना कसरी सम्भव भयो? परमेश्वरले चेलाहरूलाई पवित्र आत्मा दिएकोले।
बाहिर एउटा ठूलो भीड थियो। किनभने थुप्रै ठाउँबाट मानिसहरू त्यो चाड मनाउन यरूशलेममा आएका थिए। येशूका चेलाहरूले ती मानिसहरूको भाषा फरर्र बोलेको देखेर तिनीहरू छक्क परे। परमेश्वरले पवित्र आत्मा ‘खन्याउने’ र यो पाउनेहरूले अचम्मका कामहरू गर्न सक्ने योएलको भविष्यवाणीलाई संकेत गर्दै पत्रुसले यरूशलेममा भएको घटनाको वर्णन गरे। (योएल २:२८, २९) पवित्र आत्माको यो सशक्त प्रमाणले एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको स्पष्ट पाऱ्यो: त्यो हो, परमेश्वरको अनुग्रह अब इस्राएलमा होइन तर भर्खरै बनेको ख्रीष्टियान मण्डलीमा थियो। परमेश्वरलाई स्वीकार्य तरिकामा उहाँको सेवा गर्न चाहनेहरू अब ख्रीष्टको अनुयायी बन्नुपर्ने थियो।
त्यसैबीच, सतावट अझै बढ्यो अनि शत्रुहरूले चेलाहरूलाई झ्यालखानामा हालिदिए। तर राती यहोवाको स्वर्गदूतले झ्यालखानाको ढोका खोलिदिए र प्रचारकार्यलाई निरन्तरता दिन चेलाहरूलाई भने। उज्यालो भएपछि तिनीहरूले ठीक त्यसै गरे। तिनीहरू मन्दिरमा गएर येशूबारे सुसमाचार सिकाउन थाले। तिनीहरूका विरोधीहरू क्रोधित भए र प्रचारकार्य बन्द गर्ने आज्ञा दिए। निडर हुँदै प्रेरितहरूले यस्तो जवाफ दिए: “हामीले मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरको आज्ञा अवश्य मान्नुपर्छ।”—प्रेरित ५:२८, २९.
सतावट झनै चर्कियो। केही यहूदीहरूले चेला स्तिफनसलाई ईश्वरनिन्दा गरेको आरोप लगाए र नमरुन्जेल ढुङ्गाले हाने। टार्ससका शावल नाउँ गरेका एक युवकले त्यो हत्यामा स्वीकृति जनाउँदै हेरिरहे। त्यसपछि तिनी ख्रीष्टको पछि लाग्नेजति सबैलाई समात्न दमीशक गए। बाटोमा जाँदै गर्दा स्वर्गबाट अचानक एउटा ज्योति तिनको वरिपरि चम्क्यो र तिनले यसो भन्ने सोर सुने: “हे शावल, हे शावल तिमी किन मेरो खेदो गर्दछौ?” त्यो ज्योतिले गर्दा अन्धो भएका शावलले सोधे: “हे प्रभु, तपाईं को हुनुहुन्छ?” जवाफ यस्तो आयो: “म येशू हुँ।”—प्रेरित ९:३-५.
तीन दिनपछि येशूले हननिया नाउँका एक चेलालाई शावलको दृष्टि फर्काउन तिनीकहाँ पठाउनुभयो। शावलले बप्तिस्मा लिए र साहसी भई येशूबारे प्रचार गर्न थाले। शावल पछि प्रेरित पावल भनेर चिनिए र ख्रीष्टियान मण्डलीका एक जोसिला सदस्य भए।
येशूका चेलाहरूले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार यहूदी र सामरीहरूलाई मात्र सुनाउँदै थिए। अब एक जना स्वर्गदूत परमेश्वरको भय मान्ने रोमी कप्तान कर्नीलियसकहाँ देखा परे र प्रेरित पत्रुसलाई बोलाइ पठाउन भने। पत्रुस र अरू भाइहरूले कर्नीलियस र तिनको घरानालाई प्रचार गरे। पत्रुस बोल्दै गर्दा ती गैर-यहूदी विश्वासीहरूमाथि पवित्र आत्मा खनियो र तिनले येशूको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दिने निर्देशन दिए। अब अनन्त जीवनको बाटो सबै जातिका मानिसहरूका निम्ति खुला भयो। ती ख्रीष्टियानहरूको मण्डली पृथ्वीको कुना-कुनासम्म सुसमाचार प्रचार गर्न तयार भयो।
— प्रेरित १:१–११:२१ मा आधारित।
पेन्तिकोसको चाडको बेला के भयो?
येशूका चेलाहरूको प्रचारकार्यलाई शत्रुहरूले कसरी लिए?
सबै जातिका मानिसहरूका लागि अनन्त जीवनको बाटो कसरी खोलियो?